Sisekhona isikhathi - Igesund | isiZulu
Johannesburg - Umqeqeshi weBafana Bafana uGordon Igesund uthe usemningi umsebenzi omhlalele neqembu ngemuva kokuthi beguqiswe ngo 1-0 yiZambia koweNelson Mandela Challenge ngoLwesithathu ebusuku, kubika iSoccer Laduma.
Igoli elibe lihle kakhulu likaCollins Mbesuma yilo elihlukanise impumalanga nentshonalanga, kodwa iBafana ihlulekile ukwakha amathuba okufaka amagoli ngesikhathi begadulisana nalabo shampeni base-Afrika.
U-Igesund ukholelwa ekutheni udinga isikhathi esithe xaxa nabadlali bakhe.
Uthi ngaleyo ndlela izinto zizoshintsha, wathi ngeke akufihle ukuthi kumjabhisile ukuhlulwa.
"Siyabahalalisela, bafake igoli elihle kakhulu. Ngicabanga ukuthi besingenza kangcono nathi," esho.